Nezvedu - Tianjin Honest Tech. Co, Ltd.
Tianjin Kutendeseka Tech. Co, Ltd.
Tianjin Kutendeseka Tech. Co, Ltd. yakavambwa muna 2014, inova nyanzvi yekugadzira uye ekisipota ine chekuita nedhizaini, kuvandudza uye kugadzirwa kweMITAMBO DZINODZIVIRIRA, TOWELS uye LED LIGHT. Isu tiri muTianjin, inova imwe yechiteshi chikuru chengarava kuchamhembe kweChina. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro yemhando uye zvinokosheswa mumisika dzakasiyana siyana pasirese. Zvivakwa zvedu zvakashongedzerwa uye kugona kwekunaka kwemhando yepamusoro pamatanho ese ekugadzira zvinotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi.
Kwemakore mashoma apfuura ekugadzira uye manejimendi uye kuongorora, Kutendeseka kumisikidza yayo yega mhando manejimendi manejimendi. Hinge yakatendeseka pamusoro pemakore yakagara ichitevedzera "kuisa vanhu pamusoro, kubata nevanhu vakatendeseka" zvinangwa zvebhizinesi. Kuzvipira kukupa iwe yemhando yepamusoro zvigadzirwa uye mhando masevhisi. Iva nehunyanzvi, yakazvipira dhizaini manejimendi timu, kune yega yega maficha uye maitiro ari akaomarara kuyedza uye kutonga.
Nekuda kwezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvakanakisa basa revatengi, isu takawana wepasirese kutengesa kutengesa kunosvika Britain, America, Japan, Germany, Spain, Italy, Sweden, France neRussia, nezvimwe.
Bhizinesi redu hombe rinosanganisira kudzivirira kweMuviri, Towels, uye mwenje yeLed. Tinogona kukupa iwe back brace, rutsigiro rwechiuno, rutsigiro rwemabvi, rutsigiro rwechitsiko, tauro yekugezesa, mota yakadzama yekuchenesa tauro, kukurumidza kuomesa tauro bvudzi, uye tochi, mwenje wemwenje, mwenje webhasikoro, mwenje wekudonha, nezvimwe. Uye kana usina kuwana zvigadzirwa zvaunofarira, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, uye isu tichafara kubatsira.
Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu kana uchida kukurukura yetsika odha, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.